Puntland oo 12 sano jirsaday - BBC News Somali
Puntland oo 12 sano jirsaday
1 Agoosto 2010
Image caption Xuska sanadguurada 12-aad ee Puntland
Xaflado kala duwan oo lagu maamuusayo xuska sannad-guuradii 12aad ee ka soo wareegtay dhismaha maamulka Puntland ayaa maanta lagu qabtay magaalooyinka waxana ka qaybgalay masuulliyiinta dawladda. Waxaa lagu wadaa in maanta iyo caawa la qabto xaflado kale oo isugu jira kulamo iyo ciyaaro kubbadda cagta ah oo lagu maamuusayo xuska 1-da Ogost ay ka dhacaan meelo kala duwan. Weriyaha BBCda Axmed M.Cali ayaa warbixintan kaga warramaya sida ay u dhaceen xafladahaas.
Xafladaha lagu xusayo 1-da bisha Ogost kuwoodii ugu waawaynaa waxay maanta ka dhaceen xarumaha wasaraaradaha dawladda ee Garowe iyo xarunta madaxtooyada Bosaso waxana intii ay socdeen laga soo jeediyay barnaamijyo kala duwan oo isugu jiray suugaan iyo khudbado maalintan ku aaddan.
Mudanayaal maanta halkaynu fadhino waxaa ka muuqda sharaf, karaamo iyo qurux waxana mahad wayn iska leh dadkii dhidibbada u taagay dhisma dawladda Puntland sannadkii 1998.
Cabdirashiid Maxamed Xirsi
Munaasabadii ka dhacday magaalada Bosaso waxaa ka qaybgalay M/wayne ku xigeenka Puntland C/samad Cali Shire iyo madax kale oo dawladda ka tirsan. Xafladda kale ee ka dhacday magaalada Garowe waxaa iyana ka qaybgalay guddoomiyaha barlamanka Puntland iyo xubno kale oo ka socday golayaasha dawladda iyo qaybaha bulshada.
Mas'uuliyiinta ka hadashay
Wasiirka horumarinta qoyska Caasha Geelle Diiriye oo ka hadashay kulankii ka dhacay Garoowe ayaa aad ugu dheeraatay waxqabadkii dawladda Puntland ee sannadkii la soo dhaafay xagga waxbarashada, caafimaadka, biyaha, sal-u-dhigista dhaqaalaha dalka, nabadgelyada iyo la dagaallanka burcad-badeedka iyo tahriibta.
Guddomiyaha barlamanka Puntland C/rashiid Max’ed Xirsi oo kulankaas ka qaybgalay ayaa isagana faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay lahayd dhismihii dawladda Puntland sannadkii 1998 taas oo uu ku tilmaamay mid qiimaha ay leedahay laga dheegan karo mirihii laga dhaxlay 12kii sano ee la soo dhaafay.
''Mudanayaal maanta halkaynu fadhino waxaa ka muuqda sharaf, karaamo iyo qurux waxana mahad wayn iska leh dadkii dhidibbada u taagay dhisma dawladda Puntland sannadkii 1998. Waxan hubaa iintii ka dambaysay dhismihii Puntland waxaynu ku jirnay horumar iyo barwaaqo, aqoonsi ummadeed iyo mid qowmiyadeed taas oo uu mahaddeda koowaad iska leeyahay Ilaahay''. ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Xirsi.
Gudoomiyiyuhu wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in Soomaaliya la dumiyay oo si ulakac ah loo burburiyay hase ahaatee wuxuu hadalkiisa oo dhan ku aaddanaa dagaallada u dhexeeya ururrada Islaamiga ee Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee ay dagaalka isaga horjeedaan.
''Soomaaliya waa la burburiyay, cadow dibadeed ayaa ku soo duulay kaas oo kaashanaya dad innaga tirsan oo wax-ma-garad ah kuwaas oo adimo u noqday cadowga Soomaaliya burburiyay. Mudanayaal Waa nalaku soo duulay waana dagaallamaynaa.'' ayuu ku daray Guddoomiyuhu.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Sheekh
Inkasta oo madaxwaynaha Puntland uu ku sugan yahay magaalada Garowe haddana kama qaybgelin xafladii maanta halkaas ka dhacday waxase la sheegay inuu ka qaybgeli doono xaflad kele oo caawa ka dhici doonta xarunta madaxtooyada, sidoo kalana xafladdan waxaa laga weeciyay fagaarihii waynaa ee caadi ahaan horay loogu qaban jiray taas oo u muuqata inay la xiriirto sababo xagga ammaanka ku saabsan.
Marka laga yimaado kulanka wayn ee lagu wado in uu caawa ka dhaco xarunta madaxtooyada waxaa kale oo iyana qorshaysan ciyaaro kubbadda cagta ah oo ay ku kulmi doonaan 4-kooxood oo laga soo xulay naadiyada Puntland kuwaas oo abaalmarino la guddoonsiin doono.